Kuuriya: Wafdi Sare oo ka socda Koofurta oo u ambabaxay Woqooyiga – Kasmo Newspaper
Kuuriya: Wafdi Sare oo ka socda Koofurta oo u ambabaxay Woqooyiga
Updated - March 5, 2018 1:57 pm GMT
London (Kasmo), Wafdi heer sare ah oo ka socda Kuuriyada Koofureed ayaa maanta oo Isniin ah, 5tii March, u ambabaxay Kuuriyada Woqooyi, isaga oo u kala dabqaadaya Pyongyang iyo Washington, sii loo soo afjaro qalalaasaha dhul-biyoodka Kuuriya.
Ergada 10ka xubnood ka kooban waxaa hoggaaminaya Agaasimaha Xafiiska Nabadgalyada (NSO), Chung Eui-yong, waxaana ku jira Madaxa Sirdoonka Qaranka (NIS), Suh Hoon, ruugcaddaa hore ee wadahadallada Kuuriya.
Sida uu qorayo Wargayska ‘The Korea Times’ ee Koofurta ka soo baxa, waa safarkii u horreeyay oo noociisa ah, tan iyo markii Madaxweyne Moon Jae-in la doortay, 10kii May 2017. Isu dhowaanshaha 2da dhinac waxay soo bilaabatay markii khudbaddiisii sannadka cusub, Kim Jong-un, ku caddeeyay in dalkiisu diyaar u yahay wadaxaajood in uu la galo dariskiisa.
Sidaa darted, wufuudda 2da dal waxay 9kii Jenaayo ku kulmeen tuulada Panmunjom oo xadka ah, (Halkii lagu saxiixay xabbad joojintii 1953kii) iyaga oo ku heshiiyay in wafdi cayaartooy ah oo ka socda Woqooyiga ka soo qaybgalaan Cayaarihii Qaboobaha (Winter Olympics), markii u horreysay tan iyo sannadkii 2015.
26kii Febraayo, dhammaadkii cayaarihii Olimbikada, Kuuriyada Koofureed waxay Pyongyang iyo Washington ka codsatay in hoos loo dhigo xiisadda, wda hadallana la isu diyaariyo.
Si kastaba ha ahaatee, 2da dal, ilaa maanta, waxay kala taaganyihiin mowqifyo iska soo horjeeda, iyada oo Pyongyang ku adkaysanayso in Maraykanku, marka hore u aqoonsadso quwad Nuclear ah. Dhanka kale Maraykanka ayaa qudhiisa caddeynaya in uu wadahadallada diyaar u yahay, laakiin ku xiraya shuruud Pyongyang ayan oggolaan Karin oo ah joojinta barnaamijka Nuklearka.
Sidoo kale carbisyada Militari ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koofureed ee qorshaysan April ayaa qayb ka noqonaya sii jiritaanka xiisadda oo Pyongyang ku cambaaraysay in ay minjaxaabinayaan dadaalkii 2da Kuuriya gaareen intii cayaaraihii Olimbikadu socdeen.